Mpanamboatra sy mpamatsy saron-tava China LSR | Chapman
✭Noho ny fangatahana avo amin'ity silikônan'ny ranoka ity dia nanamboatra lasitra LSR 6 ho an'ny mpanjifanay izahay. Ny isan'ny lava-lavaka isaky ny bobongolo dia lavaka 4, ary ny maodely aloha sy aoriana dia vita amin'ny fitaovana vy mahery S136, ary ny hamafiny dia degre HRC48-52.
✭Noho ny fitakiana fisehoan'ny vokatra hentitra dia tsy maintsy fehezina ao anatin'ny 0.03mm ny tsipika fizarazaran'ny vokatra. Ny fahamendrehan'ny volavolan-tsika dia tsy maintsy fehezina ao anatin'ny 0,005-0.01mm. ary ny fisarahana tsy ara-dalàna, dia tena sarotra amin'ny famokarana lasitra. Tsy maintsy ataontsika antoka fa afaka mahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa ny fitaovantsika sy ny haitao fikirakirana. Nandritra ny 35 andro nikirakira sy namokarana, dia nahomby tokoa ny fitsapana ny lasitra, ary nametraka avy hatrany ny mpanjifantsika tamin'ny famokarana betsaka.
Bobongolo No. CPM-20-S1066
Famaranana ambonin'ity VDI-12
Fitaovana plastika silisiôma
Ampahany lanja 50.7g
Haben'ny bobongolo 400 X 450 X 417mm
Anaran'ny ampahany Saron-tava LSR
Bobongolo fitaovana S136 / P20
Fotoana tsingerin'ny bobongolo: 120 ny
Ampiasaina miaraka amina respirator silônika azo ampiasaina ara-tontolo iainana miaraka amin'ny tombo-kase tery amin'ny rivotra, ny Mask dia noforonina ary novolavolaina ho an'ny mpiasa an-kalamanjana amin'ny tontolo be risika. Natokana ho an'ny rehetra izao.
Ity sarontava ity koa no voalohany amin'ny karazany * satria miantoka fiarovana avo lenta izy noho ny endriny cartridge fanavaozana sy azo ovaina. Satria vita avy amin'ny akora biolojika mifanaraka amin'ny hoditra izany, ny sarontava dia azo esorina tsara ary ampiasaina isan'andro ary mety haharitra roa taona.
Ny coronavirus dia miparitaka amin'ny vongan-tsofina rehefa mikohaka na mievina ny olona iray voa, na avy mifanena amin'ny faritra maloto ary avy eo mikasika ny masonao, oronao na vavanao.
Namboarina tamin'ny angona tarehy 3D mba hifanaraka amina endrika isan-karazany, ny silônaly malefaka dia mifanaraka amin'ny endrika endrik'ireo mpitafy, izay ahazoana aina mitafy mandritra ny fotoana maharitra nefa tsy misy fanitsiana, mangana na mahasosotra.
Previous: Famonoana familiana servo kely mazava tsara
Manaraka: Fonony ambany sy fonony ambany ny maso Control Unit